दादुरा र रुबेला खोपबाट कोही नछुटुन् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
दादुरा र रुबेला खोपबाट कोही नछुटुन्
Published On : २ चैत्र २०७६, आईतवार ०९:०६
चैत १ शनिबारदेखि गोरखामा दादुरा र रुबेलाबिरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ ।
दुई चरणमा गरी आउँदो चैतको २२ गतेसम्म पाँचौ चरणको दादुरा र रुबेलाको खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ ।
अभियानमा नौ महिनादेखि पाँचबर्षमुनिका सम्पूर्ण बालबालिकालाई दादुरा र रुबेलाको रोग विरुद्धको खोप लगाइनेछ । पहिलो चरणमा चैत १ गतेदेखि ६ गतेसम्म जिल्लाको सिरानचोक, अजीरकोट, बारपाक सुलीकोट, आरुघाट, र भीमसेनथापा गाउँपालिका अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यस्तै दोस्रो चरणअन्तर्गत चैत १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म गोरखा नगरपालिका, पालुङ्टार नगरपालिका, चुमनुब्री, धार्चे, गण्डकी र शहीदलखन गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ । गोरखामा यो अभियान अन्तर्गत २२ हजार दुईसय चार जना बालबालिकालाई दादुरा र रुबेलाको खोप लगाइने कार्यालयले लक्ष्य राखेको छ । ११ वटा स्थानीय तहको तीनसय ६४ वटा खोपकेन्द्रमा सञ्चालन गरिने अभियानमा १२ सय ९४ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन् । खोपको प्रचारप्रसारका लागि कार्यालयले यसअघि घरघरमा निमन्त्रणाकार्ड पठाइसकेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले गाउँटोलमा अन्तरक्रिया, छलफल गरेर प्रचार गरेका छन् । कटुवाल कराएर पनि खोप अभियान बारे प्रचार गरेको छ । रेडियो, पत्रपत्रिकाबाट पनि सूचना प्रकाशित, प्रशारित भएको छ ।
खोपको बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्छ । शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीमार्फत प्रचार प्रसार गरिदिए भने घरघरमा सुचना पुग्नेछ । त्यसैले सबैले सबै ठाउँबाट दादुरा, रुबेला खोपको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ ताकि कोही बालबच्चा पनि यी खोपबाट बञ्चित नहोउन् ।
राहत बितरणको हिजोकै शैलि
शिव उप्रेती : कोरोना भाइरस(कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमण न्यूनिकरण गर्न स्थानीय सरकारले राहत बितरण
(देश सञ्चार डटकमबाट हुबहु साभार) काठमाडौँ – कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले
गरीब देशहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण यसकारण कमजोर
मुकेश पोखरेल (हिमालखबर डटकमबाट हुबहु साभार) धनी र स्रोतसाधनले सम्पन्न देशहरु कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट अत्यधिक